कोरोना कहरपछि रेखा र सलमान भन्छन्, ‘नमस्कार गरौँ, संस्कार हाम्रै हो’
दैनिक अनलाइन | फागुन २२, २०७६ बिहिबार | 0
काठमाडौं । विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी र त्रास फैलिरहेको बेला त्यसबाट नेपाल र भारत पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । छिमेकी चीनबाट उत्पत्ति भएको कोरोनाबाट नेपाल पनि उत्तिकै जोखिममा रहेको छ ।
पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारले सभा, सम्मेलन, भेला, मेला, महोत्सव लगायतका भीडभाड जम्मा हुने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न सबैमा आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि भीडभाड जम्मा हुने कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न नागरिकसँग आग्रह र अनुरोध गरिरहेको छ । त्यस्तै, विभिन्न राजनीतिक दल, तिनका भातृसंगठनहरुले पनि आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरु स्थगित गरिसकेका छन् ।
विश्वका करीव ६० भन्दा बढी देशमा कोरोना फैलिएको बताइएको छ । कोरोना भाइरसको त्राससँगै हात मिलाउने र अंकमाल गर्ने चलनलाई पूर्णविराम लगाउँदै नमस्कार गर्नुपर्ने चलन अगाडि सारिएको छ । टाढैबाट नमस्कार गर्दा कोरोना भाइरस सर्ने खतरा कम हुने बताइएको छ ।
यसक्रममा बलिउड सुपरस्टार सलमान खान र कलिउडकी सुपरस्टार रेखा थापाले नमस्कार गर्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । सलमान र रेखाले आफ्नो संस्कार अनुसार नमस्कार गर्न आग्रह गरेका हुन् । सलमानले कोरोना भाइरस खत्तम भएपछि हात मिलाऊ र अंकमाल गर भनेका छन् ।
यता लोकप्रिय नायिका रेखा थापाले पनि ‘नमस्कार गरौँ, संस्कार त हाम्रै हो क्यारे ’ भन्दै आप्mनो सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् । नायिका रेखा थापाले बुधबार आफू अभिनित चलचित्र ‘हीरो रिटन्र्स’को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि कोरोनाबाट सतर्क हुन आग्रह गरेकी थिइन् । तर धेरै डराउनु नपर्ने उनको भनाई थियो । सभा सम्मेलन नगर्नु भन्ने सरकारको आग्रहलाई पालना गर्न उनले अनुरोध पनि गरेकी थिइन् ।
सलमान र रेखाको विचार लगभग मिल्छ । बिहेको बारेमा पनि दुबैको बिचार उस्तै छ । विवाह नामको संस्थामा आवद्ध नहुँदा पनि जिन्दगी चल्ने दुबैको विश्वास र दावी छ । रेखा थापा कलिउडमा दबद्व्ग नायिकाको रुपमा परिचित छिन् । सलमानलाई पनि बलिउडमा दबद्व्ग नायककै ट्याग लागेको छ । फिल्म निर्माणमा पनि दुबैको बिचार उस्तै देखिन्छ ।
सन्ध्या आचार्य ‘छमछमी सिजन ४’को विजेता
कात्तिक १०, २०७६ आइतबार रासस
दाङको बराहक्षेत्रमा भँगेरी हराएपछि खैलाबैला, भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई हम्मेहम्मे
भ्वाइस अफ नेपालकी प्रतिष्पर्धी मेचु धिमालको ‘तिम्रो मुटु मेरो मुटुु’ (भिडियोसहित)
माघ ४, २०७६ शनिबार दैनिक अनलाइन
सलमान खानले २५००० मजदुरको खातामा पैसा जम्मा गरिदिने : नेपाली कलाक्षेत्र कता हरायो ?
चैत १७, २०७६ सोमबार दैनिक अनलाइन
केटाहरुलाई किन सताउन थालिन् दाङकी याङ्शुले ? (भिडियोसहित)
माघ २१, २०७६ मंगलबार दैनिक अनलाइन
मृत्यु पहिले आमालाइ हात हल्लाउँदै गरेको फोटो वर्षकै उत्कृष्ट घोषित
माघ २४, २०७६ शुक्रबार दैनिक अनलाइन